Akụkọ - Ahịa calcium chloride na -egbu egbu enwetala mmụba dị egwu ugboro ugboro na ngalaba azụmaahịa nke ndị isi egwuregwu
Ahịa calcium chloride na -egbu egbu na -agba akaebe na ọ na -eto nke ọma. Western Chemical Corporation emechala nweta Anadarko Petroleum Corporation maka ijeri dọla iri ise na ise
A na -ejikarị calcium chloride emepụta plastik, rọba na ihe mkpuchi ihe ọkụ. Enwere ike iji ya dị ka ihe mgbakwunye ma ọ bụ akụrụngwa n'ụdị usoro kemịkal dị iche iche. Enwere ike ịgbakwunye ya na antifirizi, mmanụ dizel, mmanụ ụgbọ ala, mmanụ sịntetik, agba, varnish, polyurethane, lubricants, sealants, pesticides na ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ngwaahịa ndị a anaghị achọ ka okpomoku dị elu gbakwunye ma ọ bụ wepu ya, ọ dị ha mkpa ịchekwa ya na gburugburu mmiri na oke mmiri adịghị. N'oge na -adịbeghị anya, ụlọ ọrụ akwa na -achọsi ike maka ntụ ntụ calcium chloride. A na -ejikarị ya eme ihe dị ka onye na -ahụ maka ịdị ukwuu yana n'ịkwadebe azịza brine na akụrụngwa friji. N'ime ọtụtụ afọ, ma ọ bụ na akụ na ụba mepere emepe ma ọ bụ na -apụta, ụlọ ọrụ akwa akwa abụrụla otu n'ime ụlọ ọrụ na -ekwe nkwa n'ihe bara uru na nke ukwuu. Dabere na data sitere na Indian Brand Equity Foundation (IBEF), ahịa akwa na akwa ndị India bara uru na $ 100 ijeri na 2019, na -ewe ihe dị ka ndị ọrụ nde 45 n'ofe mba ahụ. Yabụ, ihe ndị a nwere ike ịkwalite uto nke ahịa ntụ ntụ calcium chloride anhydrous.
Nweta nlele nke akụkọ ahịa a@https: //www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1788
N'ihe banyere akara ukwu ala, mpaghara Eshia-Pacific nwere nnukwu agụụ maka ntụ ntụ chloride anhydrous ruo ọtụtụ afọ. Nke a bụ n'ihi na ụlọ ọrụ kemịkalụ na -eto n'ike n'ike. Na mgbakwunye, North America na -ewere nnukwu ntụ ntụ chloride anhydrous. Ọganihu ngwa ngwa nke ngalaba ọgwụ nwere ike ịkwalite uto nke mpaghara ntụ ntụ chloride mpaghara anhydrous n'ọdịnihu dị nso.
Na nso nso a, na Mee 2019, Western Chemical Corporation, onye na -eweta ngwaahịa calcium chloride na United States, nwetara Anadarko Petroleum maka ijeri US $ 55.
Calcium chloride ntụ ntụ bụ otu n'ime nkwadebe calcium na -eme ka mmiri jupụta na ụlọ ọrụ dị iche iche. A na -ahụ ya n'ọtụtụ ntụ ntụ, dịka nnu Epsom, magnesium sulfate, na nnu nkume. Ngwakọta ntụ ntụ a nwere ọtụtụ ojiji enwere ike iji ya na ngwa dị iche iche. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na -ejedebe dị ka ụlọ ọrụ kemịkalụ, ọgwụ, akwa, wdg. Na nkà mmụta ọgwụ, a na-eji ntụ ntụ a eme ihe dị ka onye nnọchi anya electrolyte na onye na-emegide nfụkasị. Yabụ, ihe ndị a dị mma nwere ike ịkwalite uto nke ahịa ntụ ntụ calcium chloride anhydrous n'ọdịnihu dị nso.
Ọ bụ ezie na enwere nnukwu agụụ maka calcium chloride ntụ ntụ, nchekwa ya chọrọ ọnọdụ akọwapụtara n'ihi na ọ nwere ike nweta mmiri site na ikuku wee gbanwee ya ka ọ bụrụ brine mmiri mmiri. Ya mere, a chọrọ igbe pụrụ iche iji dowe ogo ngwaahịa n'oge nchekwa. Yabụ, ahụhụ a ga -amachi uto nke ahịa ntụ ntụ calcium chloride anhydrous.